50 arimood oo lagu gaaro guur farxad leh. Qaybta 2-aad | Somaliska
Af-Soomaali / Talooyinka Nolosha
Waxaan halkaan ka sii wadeynaa qeybta 2-aad ee mowduuca aan ugu magacdarnay 50 arimood oo lagu gaaro guur farxad leh. Qaybtii hore waxaan ku soo bandhignay 10ka ugu horeeya arimaha lagu gaaro guur farxad leh.
11. Aaminaadu waa muhiim – qodobkaan waa mid iska cad, haddii aadan aaminsaneyn lamaanahaaga taasi waxay hogaanka u qabaneysaa kala shaki iyo isfahandaro.
12. Marka horeba dooro qof kugu haboon – Waxaan filayaa in qodobkaan uu ku haboonaa in laga dhigo midka koowaad. Marka aad dooraneyso cida aad guursaneyso waa in aad ku raadisaa qof adiga kuu dhigna oo aad isfahmeysaan.
13. Nadaafadu waa farxada guriga – Nadaafada guriga iyo lamaanayaashu waa mid aad muhiim u ah, guriga oo aan nadiif ahayn waxa uu dilayaa farxada. Xaaska ama sayga oo aan nadaafadeeda daryeelin waxay keeneysaa in labada qof kala xiiso dhacaan oo lamaanahaaga uusan ku dhiiran in uu kuu soo dhawaado.
14. Waa in aad naftaada hurtaa – Halkaan lagama wado in aad isqarxiso balse waxaa laga wadaa in aad u dulqaadato culeysyada nolosha. Guurku mararka qaar waxa uu noqdaa mid adag oo dhibaato ah balse markaas waxaa loo baahanyahay dulqaad iyo samir.
15. Daryeel lamaanahaaga – Xaaskaaga waa in aad u daryeeshaa sida aad isku daryeesho. Seygaaga waxaa la doonayaa in aad u daryeesho sida adigu aad isku daryeesho. Ninka ragga waxaa laga doonayaa in uu xaaskiisa u muujiyo kalgacal joogto ah iyo daryeel.
16. Hadiyadaha – In aad seygaaga ama xaaskaaga hadiyado u soo iibiso waxay kor u qaadeysaa awooda kalgacalkiina iyo xiriirka ka dhexeeya labada qof.
17. Ha noqon doqon – Waa midka qaata oo keliya balse aan dhiibin.
18. Dhibaatooyinka haku eedeyn – lamaanahaaga ha u saarin dhibaatooyinka sida “adiga ayaa sameeyay” ama “dartaa ayay ku dhacday”.
19. Maanta xooga saar – Qorsheyntu ma xuma balse in aad ka walwasho bari wax loo baahanyahay ma ahan. Noloshaada maanta ka faaideyso bari in ay imaaneyso Allah ayaa og.
20. Waligaa xasuuso in guurku uu yahay xiriir labo geesood ah- Ha sameynin wax aad ka shalaayi doonto, ha iska qaadanin go’aan aadan kala tashan lamaanahaaga.
Säpo: Qatarta ugu weyn waa argagixisada Islaamka
Abu Xudayfah says:
Waa maqaaal diirran runtiina talooyin wanaagsan ku dheehan yihiin , waxaan jeclaan lahaa in qoyska arimihiisa xooga la saaro maxaa yeelay Guryuhu haddeey hagaagaan bulshado waa hagaagtay , sidaa awgeed qof walba Talo , iyo tusalaaleeyn wixii uu awoodo hala qaybsado walaalihiis , maantna xaalkeena haddii la eego sida aan ilma Soomaali u nahay guryaheena waa lo yaabaa , dhibkaan Guunka ah ee nala dersayna aasaas waxaa u ah Guryaha oo aan hagaagsanayn inyar mooyee.
ifrah khaliif says:
November 12, 2011 at 16:53
masha allah qoral aad u muhiim ah mahadsanidin
lkn su,aal aan qabaa xaga wilasha ?
wiil wax hadiyad loga dhigo maxay u jacel yahiin ?????????????
asc dhamaan bahda kahadasha somaliska iyo masuliyiinta iyo mamulaha jimcale waad salamantahin qidobkaan ah horumarka guurka waa muhiin hadan ujawaba ifraax qobadkeeda eey ledahay raja hadiyada maxeey ujecel yahiin taasi jawabteedane haweenka wax weeydiska maxeey ujecelyahiin ayaa imaan iskusoduduboo ninka hadeey qoftiisa waxsiisa waxaaa ukordheysa farxad iyo kalsoni lakiin gabartii nin wax kaqaada caqli in eey kuheshaa ukordhaa taana waa laogyahay hasayeeshaa bur iyo biyaa alla isugudaray kalamaarmi maayaa marka wax wanaagsan lamahelee waa lahagajistaa taasaan qabaa
WIILASHA HADIYAD WAXEY U JECELYII WAA MACDA
Waa su’aal wanaagsan , balse ragu isku aragti maahan oo ninba wax ayuu hadiyad u jecelyahay , qof walbana waxa uu Jecelyahay ayuu u jecel yahay in Hadiyad loo siiyo.
Tusaale qof Aad wax u Aqriya , haddii aad Buug u hadyeeydo aad ayuu ugu Farxaa , ileen waa qof wax Aqriska jecele .
Ka waran qof Aqriska aan ku fiicneen oo Buugba kala furin haddii aad Hadiyad Kitaab u siido , waa uu kaa qaadanaa balse aad ugu farxi maa , sidaa awgeed qof walba waxa uu u jecelyahay HADIYAD in uu u helo , waxa uu Xiiseeyo.
Balse haddii LAMMAANE is qaba oo Alle Nolol Guur isugu idkay laga hadlo , waxaan is dhihi lahaa , Ragu waxyaabaha aadka u jecelyihiin in Xaasaskooda ka helaan waxaa waaye .
Soo Dhawaynta marka uu shaqo ama safar ama Waxbarasho ka imaado in Wadaado Albaabka uga Hortagto , oo Soo dhawaydo iyadoo Kalgacayl u muujinaa , xaqiiqatan wadaadii sidaa odayga dhawr mar u soo dhawaydo , Nolol wanaagsan ayay dhaxlee , maxaa yeelay Wadaadku Guriga marka uu u soo socdo aadbuu ugu farxaa ileen Soo dhawaynta Sawjadiisa ayaa ka horeeyee.
Waana hubaa in Gurigaa Guri Farxadeed Noqonaa Insha’Allah Cibaadadana halagu Dadaalo OGAADA , GURIGU haddii Cibaadadiisa Hagaagto oo Lammaanuhu isla Cibaadaystaan waa Farxada Ugu qaalisan , balse waxaa jira Lammaanayaal badan oo Heeso isla dhagaysta oo Fanaaniinta isku sheega ,
Layaabkooda haddana waxay doonayaan in guriga Dego oo Raaxo lagu dareemo , midaana waa Calaacal Timo kasoo baxeen , in la arko.
November 19, 2011 at 23:40
abu xudeyfa aad bad u mahadsan thy, walal,cibaadada ayaa wax wlbaa oo xuman ah ka hor tagta,
Kkkkkkkkkk aniga waxaa qabaa ninka haloo hadiyeeyo hilib iyo caano hadoo goosa xanuun qabin naagatana jalato naagaha ice karemka waakahelaan
November 27, 2011 at 23:48
Aniga markaan guursaday jalato bartay kahor ma’aqoon hadaadan wadin albaabka kabax cml hadaa wadana soodhawaaw